AGENT MILE.RU ADỊGHỊ ARỤ ỌRỤ MA Ọ BỤ ANAGHỊ EJIKỌTA YA - ESI MEE - 2019
Onye na Mail.Ru anaghị arụ ọrụ ma ọ bụ anaghị ejikọ.
A na-anwale Email Agent Mail.Ru ma ya mere ọ naghị esetịnye ndị ọrụ na mkpa iji chọpụta ngwọta maka nsogbu ụfọdụ na enweghị ike ime. Otú ọ dị, ọbụna n'ọnọdụ a, njehie ọrụ na-eme ma chọọ nkwụsị. Na nke isiokwu a anyị ga-akọ banyere ihe niile a maara nke ọma na malfunctions na ụzọ maka iweghachi ọrụ ope ọrụ ahụ.
Nsogbu na Mail.Ru Agent
Isi ihe kpatara ọrụ ejighị n'aka nke Agent Mail.Ru nwere ike kewaa n'ime nhọrọ ise. N'otu oge ahụ, a na-enye ntụziaka a iji wepụ naanị nsogbu a maara nke ọma. Ọ dị mkpa ka a gwa onye ọ bụla n'otu ntabi anya dịka ọmụmaatụ, dịka ọmụmaatụ, site n'ịkpọtụrụ anyị na ajụjụ dị iche iche.
Ebumnuche nke 1: Onye Nwepu Aka
O di nkpa, enweghi ike ime ka onye oru ahu noo na nsogbu ndi na-aria na server Mail.Ru ma tinye aka na oru nile. Ị nwere ike ịlele nke a site na enyemaka nke enyemaka pụrụ iche na njikọ dị n'okpuru.
Gaa na ọrụ ịntanetị Downdetector
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na sava ahụ ma enwere mkpesa site n'aka ndị ọrụ ndị ọzọ, naanị ị ga-echere ma ghara ime ihe ọ bụla. Nke nta nke nta, ọnọdụ ahụ ga-ejigide. Ma ọ bụghị ya, onye ahịa ahụ nwere ike ịda n'ihi ihe ndị obodo.
Ebumnuche 2: Old Version
Dịka akụrụngwa ọ bụla, Mail.Ru Agent na-emelite mgbe niile, na-agbakwụnye atụmatụ ọhụrụ ma wepụ ihe ochie. N'ihi nke a, na enweghị mmelite oge ma ọ bụ mgbe ị na-eji nsụgharị ahụ ebuteghị, nsogbu nsogbu nwere ike ibili. A na-egosiputa nke a na enweghị ike ịme njikọ na sava.
Gbanyụọ ụdị nsogbu ahụ site n'ịkwalite ngwanrọ ahụ na ụdị kachasị ọhụrụ. Iwepụ akwụkwọ na ntinyeghachi nke ihe omume ahụ nwekwara ike inyere aka.
Mgbe ụfọdụ, iji weghachite ọrụ nke otu n'ime nsụgharị ochie nke Onye Ọrụ, ọ ga-ezuru "Ntọala" onye ahịa na "Ntọala Ntọala" ọnọdụ mgbanwe gaa na "Https". Ihe doro anya na ihe a ka egosiri na nseta ihuenyo n'elu.
Ebumnuche nke 3: Ikike ezighi ezi
A na - egosipụta nsogbu a mgbe enwere nbanye ma ọ bụ paswọọdụ ezighi ezi na windo ikike nke Mail.Ru Agent. Ị nwere ike iwepu njehie site na ịchọta ha.
Mgbe ụfọdụ, Agent Mail.Ru adịghị eguzosi ike n'ihi iji ya na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ihe atụ kachasị ama bụ usoro nzi ozi dị na ọrụ ozi. Iji kpochapụ njehie na-emechi nsụgharị niile nke usoro ihe omume ahụ.
Ebumnuche 4: Ogwe aka Firewall
Ọ bụrụ na ihe ndị gara aga enyereghị gị aka ịnagide nsogbu dị na ọrụ onye ahịa ahụ, enwere nsogbu nrụnye ọkụ na kọmputa. Nke a nwere ike ịbụ ọrụ usoro ma ọ bụ usoro antivirus.
E nwere ụzọ abụọ si ọnọdụ a: gbanyụọ usoro nche ma ọ bụ mezie ya site na ịgbakwunye Agent Mail.Ru na ndị ọzọ. Banyere ihe atụ a nke firewall ọkọlọtọ, a gwara anyị n'otu isiokwu dị iche.
Gụkwuo: Otu esi hazie ma ọ bụ gbanyụọ Firewall Windows
Ebumnuche 5: Njikwa ure
Ihe ngwanrọ kachasị ọhụrụ n'isiokwu a na-abịa ịnwa ịnwa Onye nchịkwa nke faịlụ ya jisiri ike. Na ọnọdụ a, a na-atụ aro ka ịmepụ ngwanrọ dịka ntuziaka ndị a.
More: Iwepụ kpamkpam nke Mail.Ru site na kọmputa
Mgbe ịmechara ihe ndị ị ga-eme maka iwepu, regharịa onye ahịa site na nbudata ya na weebụsaịtị Mile.Ru. Nke a ka anyị kọwapụtara iche iche.
Gụkwuo: Esi tinye Mail.Ru na PC
Iji iweghachị kwesịrị ekwesị na ntinye ntinye nke software ahụ ga-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Na ọnọdụ nke ọnọdụ ndị anyị na-adịghị ekwu okwu, ịnwere ike ịtu aka na ngalaba ahụ. "Enyemaka" na ukara website nke Mail.Ru. Anyị ekwesịghịkwa ileghara ọrụ nkwado nke usoro ihe omume ahụ anya.